WARBAXIN EXCLUSIVE AH: PART 1 Dhibaatooyinka Shirkadaha Macdantu Ku Hayaan Deegaanka iyo Dadka Reer Fiqi Ayuub, Togdheer.
Thursday October 31, 2019 - 13:10:47 in Wararka by Shaqaalaha Burcoonline News
Macluumaadka qoraalkani wuxuu ku saabsan yahay warbixin kooban oo aan kaga hadlaayo deegaannada u dhaxeeya Saraar ilaa bad ama Saraar ilaa karin,
Sida naloo sheegey kaamkan waxaa iska lahaa shirkad uu leeyahay nin la yidhaahdo Siciid Madaxyar oo loogu magac darey "kaamka ina Madaxyar”, waana nin laga yaqaano degaankan oo ka soo jeeda degmada Gebo-gebo oo 30 km u jirta Fiqi-ayuub.
Shirkadan Khayraad mining company xafiis ayey bilowgii ka furatey degmada Fiqi-ayuub oo magaceedu ku qoran yahay laakiin waxaa la ii sheegey inaan weligii xafiiskan laga howl gelin shirkadaha kalena la mid yihiin, oo shirkadaha dhana xafiisyadoodii xidhan yihiin, xitaa kiradii iskameey bixin waa lagu leeyahay sideey ii sheegeen mulkiilayaashii guryaha. Heshiisyada shirkadaha lala galey ayaa dhigaayey in shirkadaha macdantu guryo xafiisyo ka dhigtaan ka kireystaan Fiqi-ayuub, shaqaale ka shaqeeyana degmada ka qortaan si dakhli u soo galo degmada. Laakiin waxaad moodaa in xafiisyada loo furey oo keliya magac ahaan si dadka been loogu qanciyo, dadkuna xafiisyadan waxay u bixiyeen "Waraabe u taag” micnaheeda yahay (Humaag been ah).
Kaamka 2aad African mining company "Ina Talantali ".
Quraaradaha kor ku xusan intooda badani waa jajaban yihiin, waxayna daadsan yihiin dhuuxa oo aad u nadiif ahaa intaan shirkadani degin. Quraaradahan iyo faliidhkooduba waxay halis ku yihiin dadka iyo xoolaha, hadii roobku da'ona daadka ayaa qaadaya oo taga raacinaya oo mandaqadoo dhan ayaa khatar geleysa markaas. Dadkii reer baadiyaha ahaa een la kulaney aad iyo aad ayey cabasho uga muujiyeen arintan khatarta ah. Waxaanu isku daynay in aan helno cid mas’uul ah oo aanu dhacdadan kala hadalno waanuna weyney waayo kaamka maamulkiisi wuu maqnaa. Waxaa halkaas ka cad in nimanka Chineska ee shirkadan u shaqeeya aaney dan iyo heelatoona ka lahayn dhaqanka iyo diinta oo ay sideey doonaan yeelayaan maadama cidiba ka joojineyn anshax xumada ay dhulka la yimaadeen, waxaana suurtagal ah inaan macluumaad ku saabsan dadka iyo diintaba aan la siin markey dalka imanayeen. Sida caadada ah, hadii shirkad ajnabi ahi dal timaado waxaa la siiyaa warbixin wacyi gelin ah oo buuxda oo ku saabsan dhaqanka, diinta iwm dhulka ay ka shaqeynayaan waana in ay ixtiraamayaan.
Ceelka Laas-Macaan reer-baadiyihii laga xidhey
Sidaan kor ku soo sheegey togan waxaa ku yaala ceelka la yidhaahdo” Laas-macaan” oo dadka iyo xooluhuba ka cabaan. Ceelkii sidaa ahaa shirkadani dadkii iyo xoolihiiba waa ka xidhatey oo gabyan taar leh ayey ku wareejisey, oo deynamo ayaa lagu xidhey si biyaha ceelka looga waraabiyo kaamka oo keliya. Ceelkii dadka iyo duunyaduba ka cabi jireen markii la xidhey ee awood loo sheegtey, reer baadiyihii dhulkan deganaa ee noloshooda ku xidhneyd ceelkan waxay dantu ku qasabtey in xoolahooda ay u aroor-geystaan dhul ka fog, oo maalin u sii socdaan xoolahoodu. Dadka qaarna markey xamili kari waayeen dhaqan xumada shirkadan waabey isaga guureen degaankan oo ay weligood deganaayeen. Wasaarada macdantu waxay dadka u sheegtey in shirkaduhu dheef mooyiye aaney dhibaato u keeneyn dadka, xoolaha iyo degaankaba. Biyuhuna waxay ku jireen balan-qaadyadii shirkaduhu balan qaadeen in ay horumarin doonaan Laakiin waataa la xidhey ceelkii keli ahaa ee ay haysteen. Waxaa marag ma doonta ah, in dadka degaankan degani shirkadaha u soo dhoweeyeen si sharaf iyo milgo leh si loo soo saaro kheyraadka buurtooda ku duugan, labada dhinacna wadajir uga faa’iideystaan wixii la soo saaro, lana ilaaliyo degaanka maadaama dadka degaankan degani yihiin reer baadiye xoola dhaqata ah. Waxaase halkan ka muuqata in shirkadani guud ahaanba ku xad-gudubtey xuquuqdii iyo noloshii dadka, degaankiina dhalan rogtey, ayna adkaan doonto in dib xoolo loogu dhaqo. Waxay dadka degaani ii sheegeen in ninka shirkadan horboodaya Ina Talantaali uu dadka si xun oo kibir ah ula macaamilo oo bahdilo, isagoo isku haleyna mas’uuliyiin dawlada ku jira oo saami ku leh shirkada. Waxay waajibaadkeeda ahayd wasaaarada macdanta in ay shirkadan ku duba-joogto howlaha ay qabaneyso iyo dhibaatooyinka ay geysaneyso waxaase muuqata in gebi ahaanba meel la iska dhigey mas’uuliyadan mar hadii shirkadii ficiladan ku kacdey aan cidiba waxba ka qabaneyn. Dawlada ayey ahayd inay dadkeeda iyo dhulkeeda ka ilaaliso tacadiyada loo geysanayo mana habooneyn in lagu eegto dadka dhibaabatadan aan naxariista lahayn ee lagula kacayo. Dadka reer baadiyaha ah ee degan buuraha casharaareed way dareemayaan dhibaatadan iyo tacadigan lagu hayo laakiin waxay ilaaliyaan nidamaamka iyo sharciga dalka u yaal, waayeelkoodana wey sugayaan. Waxaana aaminsanahay in dadka dhulkan ku dhaqani muujiyeen dulqaad xad-dhaaf markey dhulkoodii shirkad magac u yaal ah, oo aan la aqoon u fasaxeen bilaa xisaab.
Shirkadan African mining company sida shirkadaha kale ayey xafiis waraabe u taag ah ka furatey Fiqi-ayuub oo kiradii gurigana weli may bixin oo xitaa mushahar may siin nin shaqaale oo xafiiska ay ku qoreen markey furayeen. Sida ay ii sheegeen dadka degaanku, shirkadani markii ay degaanka ay iska horyimaadeen, waxaa degaanka yimi xildhibaano u hogaaminayey Xildhibaan Indho iyo wasiiro uu ku jiro wasiirka macdanta si loo xaliyo khilaafkaas. Ugu dambeyntiina khilaafkaas waa la soo af-jarey markii shirkadu balanqaadey in horumarinta degaanka qeyb weyn ka qaadaneyso sida laydhadh ay rakibi doonto laakiin ilaa hada wax balanqaadkaas ka hirgaley ma jirto, markii lala hadlayna waxay arinkaas u sababeeyeen wasiirka macdanta. Madaxda shirkadani waxay sheegeen in wasiirka macdantu howshaas hakiyey iyagoo aan warbixin kale oo dheeraad ah ku darin balse waxaa loo maleynayaa in shirkadani iskeed uga warwareegeyso horumarintii ay balanqaadey in ay hirgeliso maadama aan cidiba la xisaabtameyn. Dadka qaar ayaa sheegaya in shirkadani tahay shirkad ay saami ku leeyihiin saraakiil sare oo dawlada ka tirsan. Hadiise ay taasi jirto waxay noqoneysaa musuqmaasuq loo badheedhey oo qaranka hantidiisa lagu lunsanayo, waxaana loo baahan yahay in shacbigu ogaado cida leh shirkadan iyo in lala xisaabtamo.
Shirkadan African mining company hada ka hor waxay is-hortaagtey wado ay dhiseysay shirkada Khayrad mining company, kadibna arinkaa waa la xaliyey markii shirkadaas eeda la saarey oo ay soo dhexgaleen wasiiro iyo badhasaabka gobolka Togdheer. Shirkadani maamulka degmada ka dhisan wada shaqeyn lama laha, maamulka degmadana amaradiisa uma hogaansanto, sababtuna waxay tahay isku haleyn mas’uuliyiin sare oo dawlada ka tirsan. Sida nidaamku yahay waxay ahayd dhamaan shirkaduhu in la shaqeeyaan maamulka degmada si loo ilaaliyo xuquuqda dadka iyo degmada laakiin awoodaa maamulka xaqa u lahaa waa laga gacan maroojiyey. Wasaarada macdantu waxay awooda saartey inaan maamulka degmada iyo shirkaduhu wada shaqeyn yeelan. Tusaale ahaan hadii maamulku doonayo in shirkadaha la shiro oo ka wada hadlaan howlaha shirkaduhu buurta ka wadaan sida ilaalinta degaanka oo kale, haba yaraatee shirkaduhu kama soo xaadirayaan shirarkaa maamulku ugu yeedhey. Maadama shirkaduhu haystaan awood ka sareysa sharciga dawliga ah ee degmada iyo gobolka ka jira, sharcigiina gacantooda ku qaateen, waxay sameeyeen shirkaduhu waxyeelooyin badan oo khatar ku ah degaanka iyo dadkaba.